पुस महिनादेखि पाएनन् निजी स्कुलका शिक्षकले तलब | PBM News.com
पुस महिनादेखि पाएनन् निजी स्कुलका शिक्षकले तलब
काठमाण्डौं १५ असार । निजी विद्यालयका एक शिक्षकले भने, ‘चार महिना भयो तलब पाएको छैन । लकडाउन छ । महँगी छ । सापट पनि पत्याउन छोडे । घरबेटी भाडा माग्न आउनुहुन्छ । न राहत थाप्न जान सकिन्छ । न पसलबाट उधारो नै दिन्छन् । कसरी घर चलाउने ? के हामी भोकै मर्नु ?
प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानका गरेर साढे २ लाख शिक्षक र कर्मचारीको समस्या यस्तै छ । न विद्यालयले तलब दिन्छ । न सञ्चित रकम नै छ । मासिक तलब थाप्दै घर चलाउने शिक्षक कर्मचारीको चुल्ह्रो नबल्ने स्थिति आएको छ ।
कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० का कारण भन्दै महँगा निजी विद्यालयले शिक्षक र कर्मचारीको तलब दिएका छैनन् । सबै निजी विद्यालयको एउटै शुल्क पनि छैन । महिनाको ६ सय शुल्कमा पढाउने पनि छन् भने ६० हजारमाथिसम्म शुल्क लिने विद्यालय पनि छन् । बढी शुल्क लिने विद्यालयहरूको मुनाफा पनि राम्रो छ । तर कोरोनाको बहाना देखाएर शिक्षक कर्मचारीको तलब दिएका छैनन् ।
धनी विद्यालयहरूले नै शिक्षक कर्मचारीको तलब दिएका छैनन् भने शुल्कको बिल भने अभिभावकलाई पठाइरहेका छन् । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले शिक्षक कर्मचारीले ४ महिनादेखि तलब नपाएका गुनासो गरे । ‘कतिपय विद्यालयले माघ र फागुनको पनि तलब दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘९८ प्रतिशत विद्यालयले वैशाख र जेठको तलब दिएका छैनन् । सञ्चित रकम नभएकाले सरसापट गरेर चलाइरहेका छौँ ।’
तलब नपाए सडकमा निस्कने शिक्षक कर्मचारीले चेतावनी दिएका छन् । ‘लकडाउनपछि पनि अनलाइनबाट विद्यार्थीलाई पढाइ रहेका छौँ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको सिकाइलाई अवरुद्ध हुन दिएका छैनौँ । शिक्षकले तलब नपाएपछि कसरी पढाउने ?’
सरकारले अहिले अभिभावकबाट शुल्क नलिन भनेको छ । तर कतिपय विद्यालयले शुल्कको बिल पठाएका छन् । शुल्क तिर्न अभिभावकलाई दबाब दिएका छन् । ललितपुरको युलिएन्स स्कुलले विद्यार्थीको लकडाउनको समयमा यातायात खर्च शीर्षकमा समेत बिल पठाएको छ ।
घरवाटै हराएका एकबालक मृत अवस्थामा भेटिए
बेरुतमा भएको शक्तिशाली विस्फोटमा परी मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ३५ पुग्यो